कुन खोप लगाउँदा कस्तो साइड इफेक्ट ? - Mero Mechinagar
कुन खोप लगाउँदा कस्तो साइड इफेक्ट ?
भित्र अन्तर्राष्ट्रिय, कोरोना अपडेट, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, स्वास्थ्य / जीवन शैली
अमेरिकामा पछिल्लो समय डेल्टा तथा डेल्टा प्लस भेरियन्टका कारण फेरि संक्रमण तथा मृत्यु बढ्दो क्रममा छ। तथ्यांकहरुले खोप लगाउनेहरुको संख्या कम भएका क्षेत्रमा संक्रमण र मृत्युदर बढि देखिएको छ। खोप लगाएकाहरु संक्रमणबाट जोगिने तथा संक्रमण भएमा पनि गम्भीर अवस्था नआउने र मृत्युको जोखिम निकै कम देखिएको छ।
साभार : देशसञ्चारबाट
स्काउट जस्तो संस्थालाई चल्न दिइएन– ओली